creepy Castle ada ada n'ala ya iji mmenyenjo ị ma ya kama cute achọ nnukwu anụ tinyere na-ekwe omume nke na-anata 3,247 ugboro gị eto na-eme ka ọ na ihe ụtọ oghere ekwentị casinos game.
Banyere Developer nke creepy Castle
hiwere na 2014, Chance bụ a ọhụrụ ụlọ ọrụ ma a ụlọ ọrụ na-mere ka a ekwe mmalite na ubi nke online Ịgba Cha Cha site na-emepe emepe ụfọdụ dị na na na mma-ọgaranya online egwuregwu. a oghere ekwentị casinos egwuregwu na onye dị otú ahụ egwuregwu mepụtara site Chance (NYX).
a oghere ekwentị casinos game abịa na ise na-esi anwụde na egwuregwu a na-egwuri na 25 paylines. Ma ndị a paylines na-ofu na nwere ike mụbara ma ọ bụ na-ebelata ka kwa gị nhọrọ. The ego na ị nzọ na onye ọ bụla atụ ogho a na-adịghị ofu na-amalite site na 25p ka £ 625 kwa atụ ogho. a oghere ekwentị casinos egwuregwu nwere ike na-egwuri na a ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ dị ka iOS, android, na o doro anya na PC na laptọọpụ. Ị nwere anọ dị iche iche nnukwu anụ na-atọ ọchị style animation na ihuenyo. Ha na-Ballie, nkume, Tally na Squido. E nwere ụfọdụ ọkọlọtọ kaadị akara si 9 ka Ace nakwa na ha na-anọchi anya ala-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya. Egwuregwu si logo bụ ikposa nnọchianya nke game. Ị ga-ahụ a mgbe ọhịa na ihuenyo na-anọchi ihe ọ bụla ọzọ ma e wezụga ndị ikposa akara.
The ndị ọzọ na atụmatụ nke a oghere ekwentị casinos game bụ:
Random Monster wilds- Ọ bụla n'ime ihe anọ ahụ nnukwu anụ nwere ike ịgbanwe ya n'ime ọhịa na-enweghị usoro n'oge isi egwuregwu. I nwere ike inwe ọtụtụ ndị dị ka anọ random wilds na isi egwuregwu. The random wilds ga-eji dochie ndị ọzọ bụ isi na akara na-enye gị elu payouts.
Creepy spins Njirimara- Ọdịda atọ ma ọ bụ karịa nke ikposa akara n'ebe ọ bụla na-ele na n'otu oge ahụ anabata nke a mma. The ọnụ ọgụgụ nke ikposa nnọchianya nke butere a mma ga-ekpebi na ọnụ ọgụgụ nke free spins ị ga-esi.
3 chụsasịa ga-akwụ gị ụgwọ na 10 free spins
4 chụsasịa ga-akwụ gị ụgwọ na 12 free spins
5 chụsasịa ga-akwụ gị ụgwọ na 15 free spins
Tupu ịmalite na-akpọ free spins mkpa ka ị họrọ ụzọ si isii ụzọ ugbu na ihuenyo nyak nzuzo nnukwu anụ. Nke a ga-anọgide na ruo ị hụrụ niile anọ nnukwu anụ ma ọ bụ ruo mgbe i na-ahụ creepy spins n'azụ a n'ọnụ ụzọ mgbe atụmatụ ga namalite. The tọhapụrụ nnukwu anụ ga ghọọ wilds maka oge nke feature.
creepy Castle bụ a fun-jupụta ogologo anụ-themed oghere si Chance Interactive. The oghere bụ niile banyere random wilds na creepy spins ebe ị pụrụ inweta oké payouts.